06 | March | 2013 | Danya Wadi
ယခုနှစ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အတွက်လျာထားခံရသူအနက် ရေပန်းအစားဆုံးမှာ
By danyawadi March 6, 2013 Leaveacomment
ယခုနှစ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အတွက် ရေပန်းအစားဆုံးမှာ ကျောင်းသူမှ သူရဲကောင်း ဖြစ်သွားခဲ့သည့် ပါကစ္စတန် ကျောင်းသူလေး မာလာလာ ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ ပညာသင်ကြားခွင့် အပြည့်အဝ ရရှိရေးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှုံဆော် ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် တာလီဘန် သေနတ်သမားတဦးက သူ၏ ခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ မာလာလာမှာ သေလုမျောပါး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နိုဘယ်ဆု လျာထားစာရင်းတွင် ဦးသိန်းစိန်၏ နာမည် တကယ် ပါဝင်နေလျှင် လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စာရင်းပြုစု ထုတ်ဖော်နေကြသည့် လူ့အခွင့်အရေး အုပ်စုများနှင့် တိုင်းရင်းသားနှင့် လူမျိုးစု အန်ဂျီအိုများက ပြက်ရယ်ပြုကြမည်မှာ သေချာသလောက် […]
ကာမစိတ်ထကြွဆေးရောင်းချမှုဖြင့်စိန်ဂေဟာဆေး ကောင်တာနှင့်တော်ဝင်စင်တာမြေညီထပ် ရှိ Orange ဆေးကောင်တာမှ ဝန်ထမ်းအမျိုး သမီးနှစ်ဦးအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူထား …
ကာမစိတ်ထကြွဆေးရောင်းချမှုဖြင့် စိန်ဂေဟာဆေးကောင်တာနှင့်တော်ဝင်စင်တာမြေညီထပ်ရှိ Orange ဆေးကောင်တာမှ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူထား =================== စိန်ဂေဟာဆေးကောင်တာနှင့် တော်ဝင်စင်တာ မြေညီထပ်ရှိ (Orange)ဆေးကောင်တာတို့မှ တာဝန်ကျ ၀န် ထမ်း မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို တရားမ၀င် ကာမစိတ်ကြွဆေးရောင်း ချသည် ဟုဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာမှ တည် ဆဲ ဥပဒေများနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ သံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ပြောကြားရာတွင် တရားမ၀င် ကာမစိတ်ကြွဆေးရောင်းချမှုကို တားဆီးရန် ပညာေ ပး ကာလအဖြစ် ၅ ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာပေး ကာလ ကျော်လွန်၍ စိစစ်အရေး ယူေ ဆာင် ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကာမစိတ်ကြွဆေးများသည် တရားဝင်ခွင့်ပြု ထားသော […]
Burma Government Made Model Villages of Rohingya Lands
Mar-05-2013 20:54 Dr. Mazin Qumsiyeh Salem-News.com There are 50 such model villages in Rohingya Township with 200 families in each. Courtesy: Plight of the Stateless Rohingyas (RANGOON ) – To implement its Human Barrier policy the government of Burma has takenaplan to establish Model Villages to populate the Rohingya majority areas of Arakan […]
BURMA: Security Personnel (Nasaka) Squeezing Money from Rohingya CItizens
Mar-03-2013 Mohamed Farooq Salem-News.com Humiliation and theft are everyday reminders of the Rohingya struggle. Courtesy: mayupress.net (RANGOON Mayu Press) – Last nightacommanding officer with Nasaka (Burma’s border security force) named U Htay Htay Aung, along with some of his followers, emerged from Camp number five; Ngayen Chaung (Botoror Gatti) of Nasaka sector 02 […]
” အစ္စလာမ်သာသနာဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ဘာတယ်
Eye No Ddin‘s photo. ဂျာမဏီအဓိပတိဝန်ကြီးချုပ် (Angela Merkel) က လက်ရှိ ဂျာမဏီတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဂျာမန်-မုစ်စလင်မ် ၄ သန်းခန့်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဘာတယ် ” အစ္စလာမ်သာသနာဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ဘာတယ် ဒီအချက်ကို ဂျာမဏီမှာရှိတဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေကလဲ နားလည်ဖို့လိုကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့ဘာတယ် ဂျာမန်ခရစ်ယန်တွေအနေနှဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာကိုကြောက်ရွံခြင်းထက် မိမိတို့ခရစ်ယာန်အကြောင်းကို ပိုမိုပြောဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်းလဲ ပြောကြားခဲ့ဘာတယ်. news.google.com
Sai Nor Kham နဲ့ တပည့်များကို တရုတ်အစိုးရ သေဒဏ်ပေးမှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်။
Sai Nor Kham နဲ့ တပည့်များကို တရုတ်အစိုးရ သေဒဏ်ပေးမှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်။ မြန်မာနိုင်ငံသား ရှမ်းအမျိုးသား ဖြစ်သော စိုင်းနော်ခမ်းနှင့်အတူ ပါဝင်သည့် အပေါင်းပါသုံးဦးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ သား ဆန်ခမ်း၊ နိုင်ငံမဲ့ ရီလိုင် ဆိုသူနှင့် လာအိုနိုင်ငံသား ကျာရှီကာ ဆိုသူတိုကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်အစိုးရမှ ဆေးထိုး ကွပ်မျက်မည် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး ဖြစ်သည်။ ဘီဘီစီ သတင်းအရ သူတို့ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို တရုတ်အစိုးရ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ပေးမည် ဆိုသော်လည်း စိုင်းနော်ခမ်း ညီမ ဖြစ်သူ ပြောတာက ဖမ်းဆီးထား ကတည်းက တွေ့ခွင့်မရကြောင်း တွေ့ဖို့ ကြိုးသားသူ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ကိုလဲ ၁၅ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး […]
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်နှင့်ဦးထွန်းအောင် တို့ကတည်းဖြတ်၍ယခင်ထုတ်ဝေ ခဲ့သောမြေပုံစာအုပ် …
တို့ဗမာအစည်းအရုံး Dobama Asiayone ဤမြေပုံစာအုပ်ကို နယ်သာလင်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့၊ ဂျမ်ဘာတန်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ ပထဝီဝင်နှင့် မြေပုံဆွဲဌာနခွဲမှ စီစဉ် ပြုစုလျက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်နှင့် ဦးထွန်းအောင် (ရိက္ခာတော်ရ ဒုတိယပညာမင်းကြီး) တို့က တည်းဖြတ်၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန အတွက် ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ Clean Text မှ ကူးယူဖော်ပြသည် — ကျောင်းသုံး မြေပုံစာအုပ် -( မြန်မာလူမျိုး ) (4 photos)